Gịnị mere ọmụmụ Ukraine
Ibi na Ukraine
Ukraine bụ mba dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe. Ukraine ókè-ala-Belarus na n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ , Russian Federation n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ, Poland, Slovakia na Hungary n'ebe ọdịda anyanwụ, Romania na Moldova ka ndịda ọdịda anyanwụ. The South nke Ukraine na-asa site na Black Sea na Sea of ​​Azov.
Territory of Ukraine bụ 603,628 km², -eme ka ọ na- kasị ibu mba na European Afrika. The kasị elu mgbe na Ukraine bụ Mt. Hoverla na Carpathians, na dị elu nke 2061 m (banyere 6762 ft).
on August 24, 1991 Ukraine nzuko omeiwu nakweere Act nke Onwe nke na nzuko omeiwu kwuru Ukraine dị ka ihe nọọrọ onwe ha kwuo uche ala. Ukraine bụ a unitary ala esịnede 24 anāchi achi, otu kwurula Republic (Crimea).
Ukraine nwere ọkpụrụkpụ aku nwere. The isi ndi oru nke aku na uba bu ụlọ ọrụ. Ọ akụkọ ihe akụkụ kasị ukwuu nke mba ego. Ọrụ ubi dị mkpa dị ka nke ọma.
Co-operation na mba ego nzukọ, na International Monetary Fund (IMF), International na European bịara n'ikperé mmiri nke nwughari na mmepe (IBRD na EBRD) na-enyere aka ịme na mmemme nke ego stabilization na-adọta ùgwù akwụmụgwọ ego ha na aku na uba nke mba.
Ukraine nwere a ukwuu n'ime ọnọdụ continental ihu igwe. Ọdịda na-N'uzọ ahaghị-ekesa; ọ bụ kasị elu na n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ugwu na kasị ala nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ. Western Ukraine-enweta na 1,200 millimeters (47.2 na) nke ọdịda kwa afọ, mgbe Crimea enweta na 400 millimeters (15.7 na). Winters ịdị iche iche site jụụ tinyere Black Sea ka oyi ime ebe n'ime obodo. Na nkezi oyi okpomọkụ bụ site -8˚C ka -12˚C (site + 17.6˚F ka + 3˚F). Na Southern mpaghara oyi okpomọkụ bụ banyere 0˚C (+320F). Na nkezi okpomọkụ okpomọkụ: site + 18˚C na 25˚C + (site + 64.4˚F ka + 77˚F) ma n'oge ehihie na ọ nwere ike iru + 35˚C (+95F).
mkpokọta bi nke Ukraine e mere atụmatụ na 45,426,200 na January 2014. The kasị ibu obodo na Ukraine bụ Kyiv (isi obodo nke Ukraine). Ukraine na-ebi nnọchiteanya nke 128 mba, mba, na agbụrụ dị iche iche.
The ala asụsụ nke Ukraine bụ Ukrainian. Russian, nke bụ de facto ukara asụsụ nke Soviet Union, ọtụtụ kwuru, karịsịa n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ndịda Ukraine. E nwere ụfọdụ iche iche na-ekwu okwu Crimea-Tatar, Romanian, Polish, Hungarian na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
Religion: Ndị kwere ekwe nke ọtụtụ okpukpe. Orthodox na Greek Catholic (Ukrainian Catholic nke Byzantine Rite) bụ nnukwu.
Hryvna bụ a mba ego nke Ukraine. Ọ nọwo na mba ego ebe ọ bụ na September 2, 1996.
Modern Ukraine omenala nwere otutu na-emekarị ndị Russian na Belarusian omenala. Ọ bụ nnọọ ihe kwere nghọta dị ka ihe niile atọ mba ka ha mere mgbọrọgwụ na mmalite si Kievan rus, ma n'oge narị afọ nke 13, ha malitere na-emepe emepe ka onye mba ha na-now. History-egosi na mba ọ bụla yiri ka ọ na-ike akụkọ na-emeghị na akụkọ banyere ya akụkọ gara aga. Mere eme na-emekarị asughariwo a ụzọ mmadụ na-achọ ịhụ ha, ma nke ahụ apụtaghị na nke a bụ ụzọ ata ama mere.
N'ime 500 obodo Ukraine e tọrọ ntọala ihe karịrị 900 afọ ndị gara aga, na- 4,500 obodo nta nke Ukraine nwere ihe karịrị 300 afọ.
Na ihe karịrị 150-puku ncheta nke ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme, na nkà mmụta ihe ochie na-egosipụta dị ịrịba ama n'akụkọ ihe mere eme nke Ukraine ndị mmadụ. 80 % nke ncheta nke Kyivan rus epoch (IX - XII ọtụtụ narị afọ) -lekwasị nke dị n'ókèala Ukraine.
E gwupụtara nke oge ochie obodo na Tira, Olvida, Chersonese, Panticapea mkpakọrịta nwoke na nwaanyị si 5th century B.C. nakwa dị ka ndị dị ebube wusiri ike wuru na nke 14-15th narị afọ site Ịtali si Genoa, na-dị na Crimea.
Karịrị 600 ngosi ihe mgbe ochie ịme kasị pụta ìhè eziokwu na mmadụ nke Ukraine akụkọ ihe mere eme na omenala.
Ukraine nwere magburu onwe na iche iche ọdịdị ala, ọnọdụ Ihu Igwe, na sinik ọdịdị. Ukraine njem rụọ tụlee Oké Osimiri Ojii na Crimea dị ka onye na mma ebe ugwu, ugwu agbakarị ígwè, ịrị ugwu na mmiri. The Carpathian ugwu, bụ a omenala ebe ski, ugwu na kayaking.
Ọtụtụ ógbè nke Ukraine zọpụtakwa agbụrụ ha n'echiche. Eme njem nleta ya mere nwere nnukwu ohere matakwuo na mba omenala, songs, egwú, na nri.